अश्लील गाली गर्ने यी ५ सुगाहरु जसका कारण चिडियाखाना भयो बदनाम ! - टि. एल. एन पोस्ट
Home अनौठो कुरा अश्लील गाली गर्ने यी ५ सुगाहरु जसका कारण चिडियाखाना भयो बदनाम !
अश्लील गाली गर्ने यी ५ सुगाहरु जसका कारण चिडियाखाना भयो बदनाम !
सुगाले गाएको वा मानिसको भाषा बोलेको त सुन्नुभएकै होला । सुगा एउटा यस्तो पंक्षी हो जसले मानिसको भाषा बोल्न सक्दछ । तर मान्छेको भाषा बोल्ने लहडमा पाँचवटा सुगाले बेलायतको एउटा चिडियाखानाको नाक नै काटिदिएका छन् ।
बेलायतमा एउटा अनौठो घटना भएको छ । त्यहाँको एक चिडियाखानामा रहेका पाँचवटा सुगाले अश्लील शब्दहरुमा गाली गर्न थालेपछि त्यो चिडियाखाना नै बदनाम हुनपुग्यो । अन्ततः चिडियाखानाले ती सुगालाई त्यहाँबाट हटाउनु परेको छ ।
ती सुगाले चिडियाखानामा घुम्न आएका मानिसहरु तथा स-साना बच्चाहरुलाई अश्लील शब्दमा गाली गर्दथे । जसका कारण चिडियाखानालाई नै आपत् पर्‍यो । ती पाँचवटा सुगाहरु यसअघि केही समय एकसाथ क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । क्वारेन्टाइन सकेर आउँदा उनीहरुमा अश्लील बोल्ने अनौठो हर्कत देखियो ।
बेलायतको लिंकनशायर वन्यजन्तु पार्क नामक चिडियाखानामा यस्तो घटना भएको हो । अधिकारीहरुले एरिक, जेड, एल्सी, टाइसन र बिली नामका खैरो रङका ती पाँचवटा सुगालाई कारबाही गरेर हटाएका हुन् ।
चिडियाखानाले ती सुगालाई फरक फरक मानिसबाट लिएका थिए र सार्वजनिक प्रदर्शनमा राख्नु अगाडि केहीदिन एउटै पिन्जडामा क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए । क्वारेन्टाइनपछि सारिएका ती सुँगाको बारेमा केही दिनमै मानिसहरुले चिडियाखानाका कर्मचारीहरुसँग गुनासो गर्न थाले ।
चिडियाखानाका कर्मचारीका अनुसार अनुसार सुरुमा त यी सुगाले एक आपसमा एक अर्कालाई गाली गर्दथे । तर त्यसपछि उनीहरुले चिडियाखानामा आउने आगन्तुकलाई पनि गाली गर्न सुरु गरे ।
चिडियाखानाका प्रमुख स्टिभ निकोल्सका अनुसार सुगाको अश्लील गालीका मानिसहरु हैरान थिए । खासगरी चिडियाखाना आउने बच्चाहरुलाई सुगाले अश्लील गाली गर्ने गरेबाट चिडियाखाना थप चिन्तित भयो । सुगाको मुखबाट गाली सुन्दा आगन्तुकहरु झनै हाँस्न थाल्दथे । मान्छेहरु जतिधेरै हाँस्थे सुगाहरुलाई अझै हौसला मिल्दो रहेछ र बढि भन्दा बढि गाली गर्ने गर्दथे ।
अधिकारीहरुका अनुसार क्वारेन्टाइनमा एक आपसमा राख्दा ती सुगाले एक अर्काबाटै अश्लील बोल्न सिकेको हुनुपर्दछ । अब ती सुगालाई त्यहाँबाट हटाएर छुट्टाछ्ट्टै पिँजडामा राखिएको छ । यसरी छुट्टाछुट्टै राख्दा उनीहरुले अश्लील गाली बिर्सने विश्वास चिडियाखानाको छ ।
Previous articleपल र समीक्षाको भिडियो रिलिज (भिडियो सहित )
Next articleरेखाको समर्थनमा कुन्तीलाई दीपकराज गिरीको जवाफ– क्यामरा अगाडि तपाईँको पसिना छुट्नेछ
विश्वकै लामो ‘लभलेटर’ आइपुग्यो काठमाडौंमा
विश्वकै सबैभन्दा लामो प्रेमपत्र मध्येको एक ‘द वल्र्ड लेटर’ नेपाल पनि आइपुगेको छ । २३ हजार शब्द समेटिएको उक्त लभलेटर बोकेर विश्वयात्रामा निस्किएकी फ्रेन्च-इरानी कलाकार...
सबै काम छोडेर प्रहरीले खोज्दैछ किन गधा ?
सुन्दा अचम्म लाग्ला तर प्रहरीले आफ्नो सबै काम छोडेर गधाको खोजीमा उत्रिएको छ ।भारतको राजस्थानस्थित हनुमानगढ जिल्लामा लगातार गधाको चोरी भइरहेका कारण प्रहरी गधाको...
TLN Post - December 27, 2021 0
संसार ढुङ्गे युगबाट बैज्ञानिक तथा प्रविधिमैत्री युगमा लम्की रहेको छ। यसै बिचमा संसारमा बिभिन्न खालका आविष्कारहरु भइरहेका छन्। कतिपय आविष्कारहरू हामीलाई बिश्वाश नै नलाग्ने...
सम्बन्धविच्छेदको लागि श्रीमतीले राखिन् श्रीमानलाई ८ हजार वर्ष कैदको शर्त
TLN Post - December 26, 2021 0
विवाहपछि श्रीमानश्रीमतीबीच हुने खटपटले कहिलेकाँही सम्बन्धविच्छेद समेत गराउँछ । सम्बन्धविच्छेदपछि श्रीमान र श्रीमतीमाथि विभिन्न प्रकारका नियमहरु लागू हुने गर्छ । तर, देश र कानुनअनुसार...
लुम्बिनीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेस, यी हुन् सम्भावित मन्त्री
के तपाईंको वाई-फाई राम्रोसँग चलेन ? यस्ता छन् समाधानका ११ उपाय